Sida Loo Abuuro Istaraatiijiyada Warbaahinta Bulshada Ka Qaybgelinta Shaqaallaha: Talooyin iyo Qalabka | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Sida Loo Abuuro Istaraatiijiyada Warbaahinta Bulshada Ka Qaybgelinta Shaqaallaha: Talooyin iyo Qalab
Sida Loo Abuuro Istaraatiijiyada Warbaahinta Bulshada Ka Qaybgelinta Shaqaallaha: Talooyin iyo Qalab
Istaraatijiyad ka-qaybgalka shaqaalaha ma aha inay noqoto mid adag. Si fudud uga qayb geli shaqaalaha istaraatiijiyadaada bulsheed si aad uga dhigto kuwo si aad ah ugu mashquulsan shaqada inta aad kordhinayso gaadhistaada bulsho.
Edelman Trust Barometer waxay muujinaysaa in dadku ay aad ugu kalsoon yihiin shaqaalaha caadiga ah (54%) marka loo eego maamulaha guud ee shirkadda (47%). Kalsoonidooda ay ku qabaan khubarada farsamada ee shirkadu waa ka sii badan tahay (68%).
Ka-qaybgalka shaqaalaha ee warbaahinta bulshada waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku gaarto suuqaada codadka ay u badan tahay inay ku kalsoonaadaan. Isla mar ahaantaana, waxay u ogolaataa shaqaalaha inay soo bandhigaan hankooda shirkadooda iyo khibradooda warshadeed.
Bonus: Soo deji qalabka u doodista shaqaalaha ee bilaashka ah taasi waxay ku tusinaysaa sida loo qorsheeyo, loo bilaabo, oo loo kobciyo barnaamijka u doodista shaqaalaha ee guuleysta ee ururkaaga.
Waa maxay istaraatiijiyada ka qaybgalka shaqaalaha warbaahinta bulshada?
Istaraatiijiyad ka-qaybgalka shaqaalaha warbaahinta bulshada waa qorshe qeexaya sida shaqaalahaagu u kordhin karaan muuqaalka astaantaada ee warbaahinta bulshada.
Waa in lagu daraa xeeladaha ku dhiirigeliya shaqaalahaaga inay la wadaagaan nuxurka astaanta u ah muuqaalkooda warbaahinta bulshada iyo sidoo kale aaladaha kaa caawinaya inaad u qaybiso macluumaadka kooxdaada oo aad la socoto waxqabadka.
6 talooyin degdeg ah oo loogu talagalay abuurista istaraatijiyad ka-qaybgalka shaqaalaha ee warbaahinta bulshada
1. U dir sahanka shaqaalaha
Marka loo eego Edelman Trust Barometer, 73% shaqaaluhu waxay filayaan inay ku lug yeeshaan qorsheynta shaqadooda. Haddii aad qorsheyneyso inaad isticmaasho warbaahinta bulshada si aad u wanaajiso ka qayb qaadashada shaqaalaha, waxa kaliya oo macquul ah inaad waydiiso shaqaalaha sida barnaamijku ugu shaqayn karo iyaga.
Hootsuite waxay sahamisay shaqaalaha waxayna ogaatay in kooxo kala duwan ay rabaan ilo bulsho oo kala duwan. Waxa ku jira shaqaaluhu waxay rabeen inay wadaagaan waaxyo iyo gobolo kala duwan.
Markaa, marka aad qorshaynayso sidii aad shaqaalaha uga qayb qaadan lahayd baraha bulshada, waxa aad u baahantahay in aad…
2. Sii shaqaalaha saxda ah nuxurka saxda ah
Hootsuite wuxuu abuuray golaha nuxurka si uu u hubiyo in shaqaaluhu galaangal u yeeshaan waxa ay u badan tahay inay wadaagaan.
Golaha waxaa ka mid ah wakiillo ka kala socda gobollada iyo waaxyaha kala duwan ee ururka. Xubin kasta oo golaha ka tirsan waxa uu bixiyaa ugu yaraan laba qaybood oo nuxur ah bishii oo ay shaqaaluhu la wadaagi karaan kanaalada bulshada.
Mid kasta oo ka mid ah xubnaha golaha nuxurku sidoo kale waa u doode barnaamijka ka qaybgalka bulshada ee shaqaalaha ee kooxdooda.
Markii shirkadda maamulka adeegga cuntada iyo agabka ee Sodexo ay billowday barnaamijkooda ka-qaybgalka shaqaalaha, waxay ka bilaabeen kooxda fulinta iyo madaxda sare.
Waxay u qaabeeyeen nuxurka ku saabsan hoggaanka fikirka iyo wacyigelinta daneeyayaasha. Waxay ahayd mid si weyn loogu guulaystay, iyadoo la gaadhay 7.6 milyan oo qof oo gacan ka geysatay sidii loo heli lahaa qandaraas qiimo sare leh.
Guushaan bilawga ah ka dib, Sodexo waxa ay ku balaadhisay hawl-gal shaqaale oo badan oo dhinaca bulshada ah. Ka-qaybgalka shaqaalaha ee la dheereeyey waxa ay diiradda saartaa in yar oo hoggaanka fikirka ah. Waxa ku jira waxa loogu talagalay in lagu dhiirigaliyo shaqaalaha. Waxay ka caawisaa inay balaadhiyaan isgaadhsiintooda bulsheed marka ay gaadiidka u wadaan shabakada Sodexo.
Qoraalada bulsheed ee shaqaalaha, oo inta badan isticmaala #sodexoproud hashtag, hadda waxay wadaan 30 boqolkiiba dhammaan taraafikada goobta.
3. Bixi waxyaabo badan
Shaqaaluhu waxay aad ugu dhowdahay inay wadaagaan marka ay haystaan ​​fursado badan. Waxay rabaan macluumaad dareensan inay khuseeyaan oo xiiseeyaan xidhiidhkooda bulsheed.
Barnaamijyada ka-qaybgalka shaqaalaha ee ugu guulaha badan waxay shaqaalahooda siiyaan 10 ilaa 15 qaybood oo nuxur la wadaagi karo si ay toddobaad kasta uga doortaan.
Laakin yaanay tirooyinkaas ku badin. Uma baahnid inaad abuurto wax badan oo ka kooban isla markaaba bilawga. Waxa ugu muhiimsan waa in aad barnaamijkaaga sii waddo. Ujeedo hal boosto oo cusub maalin kasta marka hore. U shaqee ilaa dhowr qoraalo maalintii marka aad bilowdo inaad barato noocyada nuxurka ee sida ugu fiican ula falgala kooxdaada.
Xusuusnow in ka-qaybgalka shaqaalahaagu waxa ku jira aanay ahayn inay kor u qaadaan alaabtaada oo keliya. Waxaad doonaysaa in shaqaaluhu dareemaan inay qiimo ku jirto nuxurka ay wadaagaan. Taas waxaa ku jiri kara qoraalada macluumaadka ee blog-ka, liisaska shaqada, ama wararka warshadaha.
4. Orod tartan
Sida aan ku muujinay qoraaladayada baraha bulshada, abaal-marintu waxay noqon kartaa dhiirigelin weyn. Tartanku waxa uu noqon karaa hab wanaagsan oo lagu kasbado shaqaalaha in ay ku lug yeeshaan baraha bulshada. Waxay noqon kartaa wax bixin hal mar ah ama tartan bille ah oo joogto ah.
Hootsuite waxa ay wadaa barnaamij dhiirigelin ah oo socda oo ay ku qotonto tartan bille ah. Faahfaahintu waa kala duwan tahay bil kasta. Hal bil, gelitaanka waxa laga yaabaa inay ku salaysan tahay buuxinta tirada ugu yar ee saamiyada. Bil kale, shaqaaluhu waa inay ka mid noqdaan saamilayda ugu sarreeya si ay u galaan. Hadafka had iyo jeer waa isku mid - in la helo shaqaale badan si ay ula wadaagaan waxa ku jira shirkadda akoonnada warbaahinta bulshada.
Abaalmarintu waa kala duwan tahay bil kasta sidaa darteed had iyo jeer waxaa jira dhiirigelin cusub oo shaqaalaha si ay u hubiyaan nuxurka weyn ee laga yaabo inay rabaan inay wadaagaan.
5. Ka qaybgal shaqaalaha soo-saarka alaabta
Nasiib darro, shaqaalahaagu way ku faraxsan yihiin marka shirkaddaadu ay abuurto wax cusub oo cusub. Ka qaybgal faafinta ereyga adiga oo u abuuraya nuxur bulsho oo la wadaagi karo olole kasta oo cusub.
"Barnaamijka ka-qaybgalka shaqaalaheenna waxa uu noqday tiir muhiim ah oo suuqa-ka-soo-baxa ah si aan u billaabo ololaha," ayuu yiri Brayden Cohen, Hootsuite's Suuqgeynta Bulshada iyo Hoggaanka Kooxda U-doodista Shaqaalaha.
Ka hel kooxahaaga hal-abuurka ah inay ka qaybqaataan qorsheynta sida loo abuuro nuxurka ololayaasha ka-qaybgalka shaqaalaha. Habka ayaa laga yaabaa inuu ka yara duwanaado nuxurka bilawga ah ee aad u abuurto kanaaladaada bulsho. Sii kooxdaada wax ay runtii ku farxi doonaan inay la wadaagaan.
"Waxaan la shaqeynaa kooxahayada hal-abuurka ah si aan u hubinno in nuxurku yahay mid cusub oo u taagan shaqaalaheenna si ay ula wadaagaan shabakadooda," Brayden ayaa yidhi. "Tani waxay noo ahayd hab cusub oo leh natiijooyin cajiib ah ilaa hadda."
Marka xogtaada ololaha bilawga ah ay diyaar u tahay inay tagaan, soo dir ogeysiis gudaha ah. Bixi faahfaahin ku saabsan bilaabista iyo dhiirigelinta ololaha gaarka ah ee kooxdaada.
Meliá Hotels International waxay bilawday ololaha #StaySafewithMeliá si loogu soo dhaweeyo martida ku soo laabata hoteeladeeda ka dib markii la xidhay sanadkii hore. Waxay kala shaqeeyeen labada wax saameeya iyo shaqaalaha ololaha si loo ballaariyo gaaritaankooda.
Casho jaceyl ah oo lala yeesho qofka aad jeceshahay daawashada qorrax dhaca MAR WALBA waa fikrad wanaagsan 🧡 #Love #StaySafeWithMelia #MeliaSerengetiLodge pic.twitter.com/xiAUN0b791
- natalia san juan (@NataliaSJuan) Maarso 22, 2021
Shaqaaluhu waxay wadaageen ololaha in ka badan 6,500 jeer, iyada oo la gaari karo 5.6 milyan.
6. La wadaag swag shirkadda
Yaa aan jeclayn alaabta bilaashka ah - gaar ahaan haddii ay tahay mid tayo sare leh oo faa'iido leh?
Sii shaqaalahaaga shaadhka shirkadda, jaakado, dhejisyo iyo waxyaabo kale oo xayeysiis ah. Waxay ka caawisaa inay muujiyaan hankooda goobta shaqada - nolosha dhabta ah iyo labadaba labadaba.
Qoraal uu wadaagay Kendall Walters (@kendallmlwalters)
Isticmaalka swag shirkaddu waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee "dhaqanka u doodista aan hadalka ahayn," sida lagu sheegay daraasad dhowaan la sameeyay.
Tani waa hab fiican oo lagu lug-yeelan karo shaqaalaha laga yaabo inaysan ku raaxaysan wadaagin waxyaabaha xayaysiinta.
3 qalab si ay uga caawiyaan ka qayb galka shaqaalaha warbaahinta bulshada
Hootsuite Amplify waa qalab gaar ah oo loogu talagalay ka-qaybgalka shaqaalaha iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada. Amplify waxay u sahlaysaa shaqaalaha inay la wadaagaan macluumaadka bulsho ee la ansixiyey ee ka mid ah miiskooda ama ku dhex socda abka mobaylka.
Marka macluumaad cusub oo bulsheed uu diyaar u yahay in la dhejiyo, si fudud ugu dar Amplify. Waxa aad u qaybin kartaa waxa ku jira mawduucyo si shaqaaluhu ay si sahal ah ugu helaan agabka ku haboon doorkooda iyo waxa ay xiiseeyaan. Shaqaaluhu waxay soo galaan mar kasta oo ay rabaan inay arkaan waxa cusub ee la heli karo oo ay la wadaagaan dhawr jeer oo keliya.
Farriimaha muhiimka ah, waxaad ku wargelin kartaa shaqaalaha ogeysiis la riixo ah oo ku jira taleefannadooda casriga ah, ama waxaad kula wadaagi kartaa boostada iimaylka. Waxa kale oo aad samayn kartaa ogeysiis gudaha gudaha Amplify si aad ula socodsiiso shaqaalaha.
2. Goobta shaqada ee Facebook
Goobta shaqada ee Facebook waa qalab iskaashi oo ay isticmaalaan ganacsiyo badan oo adduunka ah. Iyadoo shaqaale badan ay horeyba u isticmaali jireen qalabkan maalin kasta, waa kheyraad isgaarsiineed oo muhiim u ah barnaamijyada ka-qaybgalka shaqaalaha.
Marka aad ku xidhid Amplify to goobta shaqada, waxa aad ku dhejin kartaa xogwaraysi Kooxo Goob shaqo oo gaar ah.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa goobta shaqada si aad u raadiso fikrado cusub oo ka kooban. Mawduuc noocee ah ayay shaqaaluhu mar hore ka hadlayaan? Waa maxay nooca nuxurka ay wadaagaan dhexdooda?
3. Falanqaynta Hootsuite
Si aad u kobciso barnaamij wax ku ool ah oo shaqaale ah, waa inaad raad raacdaa natiijadaada oo aad barataa markaad socoto. Waxaad u baahan tahay inaad fahanto caadooyinka wadaaga shaqaalaha iyo sidoo kale saamaynta waxa la wadaago.
Falanqaynta Hootsuite, waxaad abuuri kartaa warbixin gaar ah, oo sahlan in la wadaago. Waxay kaa caawinayaan inaad barato waxa ugu fiican barnaamijkaaga waxayna caddeeyaan qiimaha uu u leeyahay madaxaaga.
Halbeegyada muhiimka ah ee la soconayo waxaa ka mid ah:
Heerka korsashada: Tirada shaqaalaha firfircoon ee loo qaybiyay tirada shaqaalaha ee is-diiwaangeliyay.
Heerka is-diiwaangelinta: Tirada shaqaalaha ee is-diiwaangeliyay oo loo qaybiyay tirada shaqaalaha lagu casuumay inay ka qaybqaataan.
Qiimaha wadaag: Tirada wadaagayaasha waxaa loo qaybiyay tirada isticmaalayaasha firfircoon.
Tirada gujisyada: Wadarta gujisyada ka kooban ka qaybgalka shaqaalaha
Dhamaystirka yoolka: Tirada dadka qaaday ficilkii la rabay ee ku jira macluumaadkaaga (u saxeexay warside, iibsasho, iwm.).
Wadarta gaadiidka Tirada booqashooyinka boggaaga ee macluumaadka la wadaago.
Taabo awooda u doodista shaqaalaha Hootsuite Amplify. Kordhi gaadhista, dadka ku mashquul, oo cabbir natiijooyinka-si badbaado leh iyo ammaan. Baro sida Amplify u caawin karo ururkaaga maanta.
Hootsuite Amplify waxay u sahlaysaa shaqaalahaaga inay si badbaado leh ula wadaagaan macluumaadkaaga taageerayaashooda-kor u qaadida garaadkaaga baraha bulshada. Qabso bandhig shakhsiyeed, oo aan cadaadis lahayn si aad ugu aragto ficil ahaan.
Ku Cusub Hootsuite: Daryeelka Macmiilka, Sanduuqa-gelinta, iyo Kordhisay Cusboonaysiinta
XaaS: Wax kasta oo Qaab Adeeg ah (oo wata 10 Tusaalo Qaybaha)